Macallinka Fasalka Labaad ee Dugsiga Hoose Lakeview oo loo magacaabay Macallinka Sannadka ee Robbinsdale | maqaalka
Macallinka Fasalka Labaad ee Dugsiga Hoose Lakeview oo loo magacaabay Macallinka Sannadka ee Robbinsdale
Abriil 28 2021
Markii ugu horreysay ee ay Susan Cunningham bilowdo waxbaridda in ka badan soddon sano ka hor, macallin khibrad leh oo ay la shaqeysay ayaa lahaa qiimeyn aad u adag.
"Waxay ii sheegeen inaysan ogeyn haddii aan waligey noqon lahaa macalin wanaagsan," ayuu yiri Cunningham. “Erayadaas had iyo jeer waxay kujireen dhabarka maskaxdayda. Waxaan u maleynayaa inay taasi tahay waxa igu dhiirrigeliya maalin walba inaan noqdo nafsadeyda ugu fiican ardayda. ”
Maanta, Cunningham waa macallin fasalka labaad ka dhigata Lakeview Elementary School ee ku yaal Robbinsdale, qiyaastii 33 sano ayaa laga joogaa markii ay maqashay dhaleeceyntaas. Hadana cimri dhererkeedu kuma filna tilmaam inay iyadu tahay macallimad weyn, aqoonsi ay dhowaan heshay ayaa laga yaabaa inuu uun sameeyo tabta. Horaantii bishan, Cunningham waxaa loo magacaabay Macallinka Sanadka 2021 Xiriirka Macallimiinta Robbinsdale.
Cunningham waxay sheegtay inay hoos u dhacday oo ay sharaf u tahay inay kasbatay abaalmarin sidan oo kale ah, runtiina aysan rumaysan karin markay maqashay warka. "Aad ayaan naftayda ugu adag ahay, ilaa dhawaanahan, waxaan u dhibtooday inaan arko waxa ay dadka kale igu arkeen sanado," ayay tiri.
Laakiin Peter Eckhoff, Madaxweynaha Xiriirka Macallimiinta Robbinsdale, ayaa sheegay inaysan dhib ahayn in la arko Cunningham oo ah macallin heer caalami ah.
"Dugsiyada Robbinsdale Area waxaa ka buuxa macallimiin aan caadi ahayn," ayuu yiri. Sannad walbana, waxaan haynaa liis garaad leh oo ah musharixiin la yaab leh abaalmarintan - liis ay horay ugu jireen Susan Cunningham. Layaab iguma aha aniga inay tahay sanadkeedi, waana la dhihi karaa ma heli karno qof ka fiican oo aqoonyahan ah oo degmada matalaya oo ah Macallinka Sannadka marka loo eego Mrs. Cunningham. ”
Cunningham waxay sheegtay in waxbarashadu waligeed ku jirtay iyada - markii ay yaraa, waxay inta badan ku ciyaari jirtey iskuulka hoostiisa. Waqtiga ay ku jirtay jaamacadda, in kasta oo ay bilowday inay riixdo wicitaankii ay ahayd inay baraan, halkii ay ka baran lahayd hadalka iyo maqalka sayniska.
“Laakiin waan ka fogaan waayey. Waan jeclahay barashada. Waxaan jecelahay in ardaydaydu ku farxaan barashada, ”ayay tiri Cunningham. “Waan jeclahay daawashada wax walba oo ku saabsan ardaydeyda oo koraya sanadka ay fasalka ila joogaan. Waxaan jecelahay daawashada 'dimmer switch' ee iftiinka u ifaya kolba markay ku guuleystaan waxbarashadooda. Waxaan jecelahay inaan maqlo iyagoo ii sheegaya sida ay u jecel yihiin dugsiga, xisaabta jecel, akhriska u jecel, qorista jacaylka. Waxaan jeclahay inaan daawado iyagoo saaxiibo ah oo is caawiya.
Maamulaha Lakeview Bridget Hall ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay Cunningham, oo, siyaabo badan, ay tahay xabagta isku haysa dugsiga. Waxay ku tidhi: "Waxay uun tahay macallin cajaa'ib leh iyo qof la yaab leh," ayay tidhi. "Marwo. Cunningham waxay leedahay sixir markay la shaqeyneyso ardaydeeda, mana ka fikiri karo qof u qalma abaalmarintan iyada ka badan. ”
Isla markaa, tani waxay noqon doontaa sanadkii ugu dambeeyay ee Cunningham macallin ahaan. Waxay ka fariisaneysaa markay sanad dugsiyeedku dhammaato Juun. "Igama luntay aniga sida ay tani u tahay waddo cajiib ah oo ay kaga baajiso safkeeda macallinimo," ayay tiri Hall.
In kasta oo ay ku faanayso abaalmarinta, Cunningham waxay sheegtay in aysan noqon lahayn macallinka ay maanta tahay la’aantii saaxiibbadeed iyo asxaabteeda Lakeview, iyo dabcan ardaydeeda iyo qoysaskooda. “Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo bulshada Robbinsdale sida ay iila wadaageen carruurtooda, oo ay igu kalsoon yihiin inaan ka mid noqdo kooxdooda. Waxaan ahaa, oo aan sii ahaanayaa, runti waa laygu barakeeyey sharafna waan u noqday inaan macalin u noqdo carruur aad u tiro badan. ”
Caadi ahaan, guuleystaha abaalmarinta Macallinka Sannadka ayaa la aqoonsan doonaa inta lagu gudajiro dabaaldegga shaqsiyeed oo ay soo qabanqaabiyeen Xiriirka Macallimiinta Robbinsdale iyo Hay'adda Toddoba Riyood ee Waxbarshada, kuwaas oo sannad walba abaalmarinta abaalmarinta ku abaal mariya macallinka ku guuleysta $ 500. Si kastaba ha noqotee, sanadkan munaasabadda waxaa loo joojiyay COVID-19 dartii.
Eckhoff wuxuu sheegay inay jiraan seddex kale oo isugu soo haray abaalmarinta sanadkan. Waxay ka mid ahaayeen: Kathy Kneeland, Armstrong High School; Marissa Hoffman, Dugsiga Sare ee Cooper; iyo Samantha Boll, Dugsiga Dhexe ee Robbinsdale.
Marka lagu daro abaalmarinta Macallinka Sannadka, Xiriirka Macallimiinta ee Robbinsdale sidoo kale waxay doortaan abaalmarinta Kaaliyaha Waxbarashada ee Sanadka. Waxaan heleynaa sheekadaas iyo war-saxaafadeed toddobaadyada soo socda.